Somaliya waxay horumar ku gaadhi kartaa luqadeeda oo ay hormariso: MAQAAL - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Somaliya waxay horumar ku gaadhi kartaa luqadeeda oo ay hormariso: MAQAAL
Dawlad la’aanta iyo burburka ku habsaday dalka ayay luqaduna ka mid tahay meelaha sida xooga loogala dagaalamay in horumar laga sameeyo. Waxa keliya ee hadda luqada sii wada waa suugaanta sida gabayada iyo heesaha ayuu yiri Xuseen Warsame taasna waxa ku socda weerar uga imaanaya wahaabiyada iyo Carabta.
Nidaamka Wahaabiga ee ku faafay dalka wuxuu dhalinta u diidaa inay ku heesaan AFKOODA HOOYO waxayna ugu bedelaan inay ku heesaan Carabi ayna intooda badan fahmin, ayadoo ay muhiim tahay in Carabiga la barto maadaama asal u yahay diinteena kuna soo degay.
”Sida Wahaabiyadu u isticmaasho Carabiga ayaa ah si qaldan taas oo ah inay nacsiiso dadka luqadooda ayuu qabaa Xirsi Warfaa. Weerarka ugu culus ayaa ka yimi luqada Ingiriiska inkastoo ay caalami noqotey haddana waxay dib u dhigtey horumar laga samayn lahaa luqada hooyo.
Maamulada jufooyinka ee min Saylac ilaa Kismaayo ka jira dalka waxay ku mashquulsan yihiin sidee kuraasta jufada loo kordhiyaa iyo sidee hadhaaga yar ee kheyraadka dalka loo bililiqaystaa marka wax kale iyaga uma cada.
Ayadoo ayan jirin dawlad dhexe oo adag inkastoo hadda ay soo xoogaysanayso iyadna waxay ku mashquushay sidii dalku u heli lahaa ciidan tayo leh oo hanta amniga laakiin way isku wadi kartey horumarinta Af-Somaliga iyo hawlaha kale ee socda, ayadoo ka bilaabaysa direyska ciidamada iyo barnaamijyada ka baxaya idaacadaha iyo weliba boodhadhka meheradaha taas oo isbedel weyn laga dareemi karo muddo yar.
”Dawladu ma fahamsano laakiin waxay abuuraysaa shaqo abuur toosa afka hooyo oo la hormariyo. Si kastaba ha ahaatee horumar laguma gaaro luqad kale waayo macnaha aqoontu waxay lumaysaa inta tarjumaada lagu jiro.
”Waxaan ku jirtaa tartan u dhexeeya labadii gumeysi ee hore iyo Turkiga oo hadda isna dagaal xoogan ugu jira sidii uu luqadiisa u gaarsiin lahaa dalkoo dhan.